Chii Chakaita Kuti Bhaibheri Risaparara?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Batak (Karo) Batak (Toba) Biak Bicol Bislama Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Mam Mambwe-Lungu Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamese Wallisian Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Bhaibheri richiripo nanhasi. Saka unogona kuwanawo rako wozviverengera. Kana ukasarudza shanduro yakanaka yeBhaibheri, zvichaita kuti uve nechokwadi chekuti zvauri kuverenga ndizvo chaizvo zvaivamo muzvinyorwa zvekutanga. * Asi chii chakaita kuti Bhaibheri rirambe riripo pasinei nekuti rakanyorwa kare, vanhu vakaedza kuriparadza uye vamwe vakaedza kuchinja zviri mariri? Rakasiyana papi nemamwe mabhuku?
“Ndava kunyatsoziva kuti Bhaibheri randiinaro chipo chinobva kuna Mwari”
Vanhu vakawanda vanoverenga Bhaibheri vanobvumirana nemashoko emuapostora Pauro uyo akati: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari.” (2 Timoti 3:16) Vanoti Bhaibheri rakaramba riripo nekuti iShoko raMwari uye kuti Mwari ndiye akarichengetedza. Faizal, ambotaurwa nezvake munyaya yekutanga akazofunga kudzidza Bhaibheri kuti aongorore kana zvaakaudzwa zvaiva zvechokwadi. Zvaakawana zvakamushamisa. Akaona kuti zvinhu zvakawanda zvinodzidziswa mumachechi hazvimo muBhaibheri. Akafarawo paakazoziva kuti nei Mwari akasika nyika.
Anoti: “Ndava kunyatsoziva kuti Bhaibheri randiinaro chipo chinobva kuna Mwari. Sezvo Mwari ari iye akasika nyika, hapana chaizomutadzisa kuti arichengetedze kusvikira iye zvino. Kuramba izvi kwakafanana nekuramba kuti Mwari ndeWemasimbaose! Uye ndingazvitaura ndakamira pai?”—Isaya 40:8.
^ ndima 3 Verenga nyaya iri muNharireyomurindi yaMay 1, 2008 inoti, “Ungasarudza Sei Shanduro yeBhaibheri Yakanaka?”
Nyaya idzi dzakatevedzana dzataura nezvekuchengetedzwa kweBhaibheri. Asi tingaziva sei kuti zvechokwadi Bhaibheri ‘ishoko raMwari’ kwete bhuku rengano? (1 VaTesaronika 2:13) Ona vhidhiyo pfupi inonzi Tingaziva Sei Kuti Bhaibheri Rinobva Kuna Mwari? iri pawww.jw.org. (Tarisa pakanzi MABHUKU NEZVIMWEWO > MABHUKU UYE MABHUROCHA)
Vakawanda vanoremedza bhuku iri asi havazivi kuti rinogona kuvabatsira sei.